London Derby & Manchester Derby – Taariikhdee ayey dhacayaan kulamada darbiga ah ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan? – Gool FM
London Derby & Manchester Derby – Taariikhdee ayey dhacayaan kulamada darbiga ah ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan?
(England) 13 June 2019. Isku aadka kulamada horyaalka Premier League ayaa lasoo saaray, waana horyaalka ugu xiisaha badan oo ay taageerayaasha kubadda cagta sugayaan inuu bilowdo.
Iyadoo ay taasi jirto hadana kulamada ugu waaweyn horyaalka Premier League ayaa si gaar ah isha loogu hayaa, gaar ahaan kulamada darbiga ah ee kooxaha isku magaalada ah ama kuwa uu ka dhaxeeyo xifaaltanka ugu weyn horyaalka.
Inkastoo ay jiraan kulamo waaweyn oo aan kasoo muuqan liiskaan, hadana xifaaltankaan iyo isku dhawaanshaha ayaa lagu saleeyay maadaama kulamadaan ay ku jiran kulanka Merseyside Derby (Liverpool vs Everton), balse aysan ku jirin kulanka Arsenal vs Man United.
Haddaba kulamada darbiga ah kan ugu soo horreeya wuxuu dhexmari doonaa dhamaadka August kooxaha ka wada dhisan waqooyiga London ee Arsenal vs Spurs, waxaana kusoo xiga kulan October isbuuceeeda saddexaad dhexmari doona kooxaha Man United iyo Liverpool.
Liiska kulamada hoos ka akhriso:
KULAMADA DARBIGA AH:
19/10/2019 Manchester United v Liverpool
07/12/2019 Manchester City v Manchester United
18/01/2020 Liverpool v Manchester United
07/03/2020 Manchester United v Manchester City
DEG-DEG: Isku aadka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan oo la shaaciyay & kulamada isbuuca koowaad.